[Politika ] 19 Febroary, 2009 10:35
Ny bevoaka sy ny zazakely no ato bouclier radem
Samy sorena aby ny mpanaram-baovao naheno oe ny vadin'ny miaramila no aroso eo aloha mba hakana seza sy ny minisitera. Namaly moa ny maro oe tsy mety ve raha ny vadin'ny mpitari-tolona no atao eo aloha eo.
Raha tsy mahomby io dia mety ny zazakely sy ny vehivavy bevoka ary ireo be antitra no ho entina atao takalon-tsorona eny @ 13mai. Aza hitako ka mijery eto ny mpitarika tolona ka haka ity sopapa ratsy ity. Andeha fafako indray ity fa sao dia mampidin-kizo ny hafa. LOL
Manarak'izany dia tena olona mpandromba mihitsy ireto etsy @ 13mai ireto satria dia nisaritaka sy ny nikorotana be omaly hariva ny tanana rehetra manodidina. Noana tany @ grevy tany mantsy izy mianankavy ka norobainy avokoa ireo mpivarotra koba sy mananasy tetsy analakely etsy @ "sept prix" iny nitohy h@ mpivarotra kafe sy mofo izay an'ny madinika mba mitady sy sahy miatrika fiainana no samaritahana ohatran'io.
Voaroba avokoa ny versment ny taxibe iray tetsy @ petite vitesse iny. Ireo mpandalo sendra mifanena aminy moa dia tsy misy miangana fa lasany avokoa ny finday sy ny vola rehetra eny @ eny. Tsy mety fay mihitsy ry zalahy ireto satria entin-javatra izany mifoka môly no tena marina. Tena ilay olona eny @ faritra iva sy tsy an'asa ireny no manao ity fandrombana ity. Mody mifangaro @ mpitolona ao ry zalahy dia avy @ angady sy ny harona rehefa avy eo. Efa misy sarety kely entiny mihitsy moa eny hiaomana entana voaroba. Tokony avy dia tifirina kosa ry zalahy ireo fa tsy ho hendry intsony raha ny fijeriko azy.